Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Yurub » Xilli-ciyaareedka barafka cusub ee Yurub ayaa ku laalaada dheelitirka
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • jiga • Waajib ah • Ammaanka • Sports • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Baahida caadiga ah ee baahida ayaa saameyn doonta maadaama masiibada, mar kale, ay madaxeeda kor ugu qaaddo suuqyada waaweyn ee isha barafka iyo meelaha loo aado.
Baahida safarrada barafka ee Yurub ayaa la filayaa inay soo korodho sanadkan sababtoo ah kor u kaca kiisaska COVID-19 iyo suurtagalnimada hoos u dhaca cagaha ee meelaha barafka lagu ciyaaro horraanta Disembar.
Diisambar caadi ahaan waxa la arkaa socdaalayaasha barafka ee soo baxaya ee u socda Europe, taasoo meesha ka saaraysa hoos u dhaca qaaradda ee xagaa ka dambeeya ee socdaalka. Tusaale ahaan, Yurub waxay aragtay safarada gudaha iyo dibadda oo kordhay 38.3% laga bilaabo Noofambar ilaa Diseembar 2019 - sannadkii u dambeeyay ee aanu saameyn ku yeelan masiibada.
Korodhkan adag ee baahida fasaxyada bisha Diisambar ayaa sida caadiga ah ku ciyaara gacmaha meelaha lagu nasto ee barafka ee Yurub, iyadoo qaar badan oo ka mid ah bisha December ay tahay bilowga xilliga barafka ee rasmiga ah. Si kastaba ha noqotee, baahida caadiga ah ee baahida ayaa saameyn doonta maadaama masiibada, mar kale, ay madaxeeda kor ugu qaadayso suuqyada waaweyn ee isha barafka iyo meelaha loo aado.
Marka loo eego sahankii ugu dambeeyay, 25% jawaab bixiyaasha Yurub waxay sheegeen inay wali 'aad uga walaacsan yihiin' masiibada COVID-19. Boqolleydan muhiimka ah ee noocaas ah si fiican uma fiicna, shirkadduna waxay rajaynaysaa in dad badan oo reer Yurub ah ay joojin doonaan ama baabi'in doonaan qorshayaasha fasaxa haddii ay arkaan in gudbinta fayrasku uu bilaabay inuu mar kale soo kordho.
Goobaha barafka ee sida Faransiiska, Talyaaniga iyo Switzerland ayaa laga baqi doonaa tii ugu darneyd, iyadoo qaar badan ay ku tiirsan yihiin bilaha soo socda si ay u daboolaan qaar ka mid ah khasaarihii soo gaaray labadii xilli ee ugu dambeysay. Europe, marlabaad, waxay isku arkaysaa xudunta u ah masiibada - waa sida xilliga barafka uu bilaabmayo inuu kordho.
Xaalada COVID-19 ee gudaha Germany waxay noqon kartaa arrin muhiim ah oo lagu go'aamiyo guusha xilli ciyaareedka barafka ee Yurub ee soo socda. Jarmalku waxa uu haystaa skiers ka badan waddan kasta oo Yurub ah, taas oo ka dhigaysa suuqan isha mid muhiim u ah meelaha barafka lagu ciyaaro. Intaa waxaa dheer, Jarmalku wuxuu ahaa suuqa saddexaad ee ugu kharash-bixinta badan dibadda ee adduunka sanadka 2020, isagoo muujinaya awoodiisa kharash-bixineed iyo rabitaankiisa inuu ku qaado safarrada caalamiga ah inta lagu jiro aafada.
Sida la soo sheegay Noofambar 24, 2021, tirada cusub ee COVID-19 ee la diiwaan geliyay hal maalin gudaheed ayaa gaartay heer cusub. Germany. Intaa waxa dheer, dhacdooyinka todobada maalmood ee dalka oo dhan waxa ay kor u dhaafeen 400. Tirooyinkan naxdinta leh ayaa soo baxay Germany waxay sababi doontaa walaac ka dhex abuurma goobaha barafka ee Yurub maadaama xannibaadaha safarka ay u badan tahay inay raaci doonaan, taasoo abuuraysa saameyn weyn dakhli soo saarka goobaha dalxiiska iyo ganacsiyada kale ee ku xiran dalxiiska barafka.